Home › What's New › Press Release-Government of India provides Relief Assistance to Myanmar Government for displaced persons in the Rakhine State(21st January, 2020)
Press Release-Government of India provides Relief Assistance to Myanmar Government for displaced persons in the Rakhine State(21st January, 2020)
Government of India provides Relief Assistance to Myanmar Government
for displaced persons in the Rakhine State
The Ambassador of India to Myanmar handed over to Rakhine State Government, Government of India’s relief assistance for the civilians of Rakhine State displaced asaconsequence of ongoing conflict. The handing over ceremony was held at Sittwe on 21 January 2020 and attended amongst others by H.E. Dr Win Myat Aye, Union Minister for Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement, H.E. U Nyi Pu, the Chief Minister of Rakhine State, H.E. U Soe Aung, Deputy Minister, Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement, U San Kyaw Hla, Speaker of Rakhine State Parliament and Ambassador of India to Myanmar H.E. Shri. Saurabh Kumar. The relief material is valued at USD 235456 and consists of 20,000 kits consisting of Rice, Rice Noodles, Toor Dal, Chana Dal, Soya Oil, Chili Powder, Turmeric Powder, Cumin Powder, Coriander Powder, Salt and Tarpaulin.
2. The assistance is part of Government of India's continued endeavor to support the socio-economic development of Rakhine State and provide it with relief material.
3. It may be recalled that the bilateral Memorandum of Understanding (MoU) providing for Indian assistance for socio-economic development of Rakhine State was signed in December 2017. The programmes under the MoU include creation of infrastructure in the areas of education, health, agriculture and allied activities, agro-processing, community development and related training. These could include, inter alia, support for construction of small bridges, upgradation of roads, small power projects, livelihood activity, setting up of training centres, conservation of environmental and cultural heritage, empowerment of women and child welfare.
4. On9July 2019, 250 pre-fabricated houses constructed for displaced persons under the above mentioned MoU were handed over to the Rakhine State Government. A set of additional projects related to construction of pre-schools, solar power supply, water supply, seed storage houses, incinerators inahospital, agriculture mechanisation, roads construction, and provision of libraries and soft infrastructure at 15 schools are under advance consideration and will be implemented during the current year under the above MoU.
5. Government of India has also conveyed its readiness to establish an India-Myanmar Industrial Training Centre in Rakhine State to impart skills to the youth of the State for greater employability. Two such centres are already in operation in Pakokku & Myingyan and two other being established at the request of Myanmar government and will be operational soon at Monywa & Thaton.
6. Under its High Impact Community Development Projects (Small Development Projects scheme), last June, Government of India provided IT equipment to Sittwe Computer University and agriculture equipment to Rakhine State Government. Earlier, India had provided medical equipment to upgrade the facilities at Sittwe General Hospital.
7. During his visit to Sittwe for the relief material handing over ceremony, Ambassador of India called on H.E. U Nyi Pu, Chief Minister of Rakhine State and H.E. U San Kyaw Hla Speaker of the Rakhine State Assembly (who had requested for the relief material). Ambassador recalled the close bilateral bonds and people-to-people relations between India and Rakhine, and Government of India’s commitment to extend all possible help for the State’s development. Ambassador emphasized that all projects being undertaken by India in Rakhine State are grant in aid projects for the welfare of the people and that there are no commercial interests involved. He added that it is imperative that security around these projects is maintained.
8. Government of India has already completed the development of Sittwe Port and Inland Water Transport terminals at Sittwe and Paletwa which are all part of the Kaladan Multi Modal Transit Transport Project (KMMTTP). The port and inland water way terminal operator and maintenance contractor has been selected and the port operations will start soon. The said project hasahuge potential to impact the economy of the State and provide livelihood to local people. The road from Paletwa to Zorinpui in Mizoram, India is an important part of the KMMTTP and is presently under construction. Once completed, connectivity between Sittwe port in Myanmar and Mizoram State of India will be established contributing to trade and commerce between Rakhine State and North-East of India. Government of India is looking forward to the early completion of this road and is confident that all concerned would provide assistance towards this objective. The total project cost of KMMTTP is estimated around USD 484 million making it the largest grant in aid project of India abroad.
အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရမှ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသို့ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအတွက်
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ပဋိပက္ခများ၏ အကျိုးဆက်အဖြစ် နေရပ်စွန့်ခွာသူများအတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ အစိုးရ၏ ကူညီထောက်ပံ့သည့် ပစ္စည်းများအား ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့်အခမ်းအနားအား ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၁) ရက်နေ့တွင် စစ်တွေမြို့၌ကျင်းပခဲ့ပြီး ထိုအခမ်းအနားသို့ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေး နှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပု၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီး ဦးစိုးအောင် ၊ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစံကျော်လှ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ရှရီ ဆော်ရဘ် ကူးမား တို့တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။ ထိုကူညီထောက်ပံ့သည့်ပစ္စည်းများ၏တန်ဘိုးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၃၅၄၅၆) ဖြစ်ပြီး ဆန်၊ ဆန်ခေါက်ဆွဲ၊ Toor Dal, Chana Dal ပဲပုပ်ဆီ၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ နနွင်းမှုန့်၊ နံနံပင်မှုန့်၊ ကူမင်းမှုန့်၊ ဆားနှင့် တာပေါ်လင်စများစသည့် ပစ္စည်းအမျိုးအစားများပါဝင်သည့် အထုပ်ပေါင်း (၂၀၀၀၀) ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ယခုကဲ့သို့ ကူညီထောက်ပံ့သည့်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခြင်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်ကူညီထောက်ပံ့ရန် အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များထဲမှ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ရခိုင်ပြည်နယ်၏လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ အကူအညီများပေးအပ်ရန် နှစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာတစ်ရပ်အား ၂၀၁၇ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။ထိုနားလည်မှုစာချွန်လွှာတွင် ပါဝင်သောအစီအစဉ်များမှာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆက်နွယ်သောဆောင်ရွက်ချက်များ၊ သီးနှံနှင့် စိုက်ပျိုးရေးပညာ ဆက်နွယ်မှုလေ့လာသည့်ပညာ၊ လူမှုအသိုက်အဝန်းတိုးတက်ရေးကဏ္ဍများအတွက် အခြေခံအဆောက် အအုံများဖန်တီးပေးခြင်းနှင့်ထိုကဏ္ဍများနှင့်ဆက်စပ်သောသင်တန်းများဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ နားလည်မှုစာချွန်လွှာတွင် အခြားသောအထောက်အပံ့များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့်အတူ တံတားငယ်များ တည်ဆောက်ခြင်း အတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ လမ်းများအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ အသေးစားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများ၊ ဝင်ငွေရမည့်လုပ်ငန်းများ၊သင်တန်းဌာနများတည်ဆောက်ပေးခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိမ်းသိမ်းခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအားလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်းနှင့် ကလေးသူငယ်များပြုစုပျိုးထောင်းခြင်းများလည်း ပါဝင်သည်။
၄။ အထက်ပါနားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ နေရပ်စွန့်ခွာသွားရသူများအတွက် အသင့်နေထိုင်နိုင်သောအိမ်(၂၅၀) တည်ဆောက်ပြီး ထိုအိမ်များအား ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၉)ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့အသင့်နေထိုင်နိုင်သောအိမ်များဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်အခြားသော စီမံကိန်း များဖြစ်သည့် ပညာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ဆိုလာစနစ်နှင့်လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ရေဖြန့်ဖြူးခြင်း၊မျိုးစေ့သိုလှောင်ရုံများဆောက်လုပ် ရေးနှင့် ဆက်စပ်သော စီမံကိန်းများ၊ ဆေးရုံများမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ မီးရှို့ဖျက်ဆီးစက်များ။ စက်မှုလယ်ယာကူးပြောင်းရေး၊ လမ်းများဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ကျောင်းပေါင်း (၁၅) ကျောင်းတွင် စာကြည့်တိုက်များနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဆောင်ရွက်ခြင်းများအားလည်း ယခုအခါ လေ့လာသုံးသပ်လျှက်ရှိပြီး အထက်ပါနားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ ယခုနှစ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။
၅။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အစိုးရသည် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိလူငယ်များအလုပ်အကိုင်များစွာရရှိနိုင်ရန်အတွက် ကျွမ်းကျင်မှုရနိုင်ရန် အိန္ဒိယ-မြန်မာစက်မှုသင်တန်းကျောင်းတခုကိုရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖွင့်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါ သည်။ထိုကဲ့သို့သင်တန်းကျောင်း (၂) ခုကို ပခုက္ကူနှင့်မြင်းခြံတို့တွင်ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နေပြီး မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ မေတ္တာ ရပ်ခံချက်အရ နောက်ထပ်သင်တန်းကျောင်း (၂)ခုကိုလည်း မုံရွာနှင့်သထုံတို့တွင်တည်ဆောက်နေပြီး မကြာမီ ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
၆။ အကျိုးသက်ရောက်မှုမြင့်မားသောလူမှုအသိုက်အဝန်းဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ (ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းငယ်များအစီ အစဉ်)အရ ပြီးခဲ့သောဇွန်လတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရသည် စစ်တွေကွန်ပြူတာတက္ကသိုလ်တွင်အသုံးပြုရန် အိုင်တီ ပစ္စည်းများနှင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် အသုံးပြုရန်ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ယခင်အစောပိုင်းအချိန် ကာလတွင်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၏ ဝန်ဆောင်မှုများမြှင့်တင်နိုင်ရန် အတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများလည်း ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။
၇။ ကူညီ ထောက်ပံ့သည့်ပစ္စည်းများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ရန် စစ်တွေခရီးစဉ်အတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးသည် ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပုနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစံကျော်လှ (ကူညီ ထောက်ပံ့သည့်ပစ္စည်းများကို မေတ္တာရပ်ခံသူ)တို့အားသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ သံအမတ်ကြီးမှနှစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာနီးကပ် သောရင်းနှီးမှုများ၊ အိန္ဒိယနှင့်ရခိုင်တို့ကြားရှိပြည်သူအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးများနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရ၏ ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှသော အကူအညီများ ပေးအပ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အထူးပြုပြောကြားခဲ့သည်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်းများအား လုံးမှာပြည်သူများ ကောင်းကျိုးအတွက် အကူအညီပေးရေး စီမံကိန်းများသာဖြစ်ပြီး စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်မပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုအပြင် စီမံကိန်းများ၏ ပတ်ဝန့်ကျင်လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးခြင်းသည်လည်း အလွန်ပင် အရေးကြီးကြောင်း သံအမတ်ကြီးမှ ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၈။ အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရသည် ကုလားတန် ဘက်စုံသုံးဖြတ်သန်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သော ရခိုင်ပြည်နယ်၊စစ်တွေမြို့နှင့်ချင်းပြည်နယ်၊ပလက်ဝမြို့တို့တွင် စစ်တွေဆိပ်ကမ်းနှင့်ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ ဆောင်ရေးဆိပ်ကမ်း တို့အားတည်ဆောက်ပြီးစီးပြီဖြစ်သည်။ ထိုစစ်တွေဆိပ်ကမ်းနှင့်ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ဆိပ်ကမ်းတို့အတွက် အော်ပရေတာနှင့်စီမံထိမ်းသိမ်းရေးဆောင်ရွက်မည့်သူများအားရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်ကာ ဆိပ်ကမ်း သည်မကြာမီစတင်လည်ပတ်ဆောင်ရွက်တော့မည်ဖြစ်သည်။အထက်ပါကုလားတန်စီမံကိန်းသည် ပြည်နယ်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အကူအညီ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်အတွင်းရှိဒေသခံများအတွက်အကျိုးရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကုလားတန်စီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သော ပလက်ဝမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဇို ရမ်ပြည် နယ်တွင်ရှိသော ဇိုရင်ပူသို့လည်း လမ်းဖောက်လုပ်လျှက်ရှိပါသည်။ ထိုလမ်းပြီးဆုံးသွားလျှင်မြန်မာနိုင်ငံ၊စစ်တွေ ဆိပ်ကမ်းမှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်သို့ ဆယ်သွယ်သွားလာနိုင်ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အရှေ့မြောက်ဒေသတို့ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပိုမို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရသည်ထိုလမ်းဖောက်လုပ်မှုအားဆောလျင်စွာ ပြီးစီးရန်မျှော်လင့်လျက်ရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှလည်းကူညီဆောင်ရွက်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ ကုလားတန်ဘက်စုံ သုံးဖြတ်သန်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်း၏ စုစုပေါင်းကုန်ကျ စရိတ်မှာအမေရိ ကန်ဒေါ်လာ (၄၈၄)သန်းခန့်ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားတိုင်ပြည်များတွင်ပေးအပ်သောအကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများတွင်အကြီးဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံသံရုံး ၊ ရန်ကုန်မြို့။
၂၀၂၀ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၁) ရက်။
Visitors: Page last updated on: May 20, 2022